1. Efa tsindrin-daona ireo mpankafy ilay andian-tantara “Games of Thrones” miandry ny tohin’ilay andiany faha-7.
Lamaody vaovaon’ireo olo-malaza : Mampitovy akanjo amin’ny zanaka
Nahita lamaody vaovao indray ireo olo-malaza, ny mampitovy akanjo amin’ny zanaka. Sady manintona ny maso no mahafatifaty ny fampitoviana akanjo amin’ny zanaka, antony nivoizan’izy ireo izany.
Herinandro monja taorian’ny nisarahan’i Miley Cyrus sy Liam Hemsworth
1. dia namoaka hira mifandraika amin’izany fisarahan’izy ireo izany izy. Ny 15 aogositra teo mantsy no nivoaka ilay hirany « Slide away » izay mitantara fa paradisa ny fotoana niarahan’izy ireo taloha.
Scarlett Johansson, Pink… tsy misaraka amin’ny findainy mihitsy
Amin’izao fihazakazahan’ny teknôlôjia izao dia tapitra manana finday avokoa ny olona rehetra. Betsaka amintsika no mitovy amin’ireto olo-malaza ireto, ka na inona ataon’izy ireo na inona, dia tsy misaraka aminy mihitsy ny findain’izy ireo.
Justin Timberlake, Georges Clooney…Nisafidy ny hanao mariazy feno voninkazo
Rehefa manomana mariazy dia manana ny toerany manokana ny voninkazo. Ho an’ireto olo-malaza ireto dia nomena anjara toerana lehibe mihitsy izany voninkazo izany ary ny an’i Justin
Mora lefy ny laza: aiza ry Indila, Craig David...?
Betsaka ireo olo-malaza tena nanamarika ny kanto nataony saingy taona vitsy taty aoriana dia adino ny momba azy fa nosoloin'ireo mpanakanto nitondra zava-baovao indray.
1. Mety ho arodana indray ireo trano natsangan’i Kanye West,
izay nahoriny ho an’ny olona sahirana nanomboka tamin’ny volana jolay lasa teo. Rehefa tena nanomboka ny asa mantsy ireo mpanao trano dia nitaraina ny manodidina fa tsy manaraka fenitra ireo trano vao nahorina ireo.
Las Vegas: fanaovan’ireo olo-malaza mariazy maimaika
Nanomboka tany amin’ny taona 40 tany dia tian’ireo olo-malaza mihitsy ilay mitsoriaka any Las Vegas ka manao mariazy.
Sary iray no navoakan’ny HBO izay fahitalavitra handefa ity andian-tantara ity manomboka ny 14 aprily ho avy izao. Ahitana “episodes miisa 6 izay maharitra 80 minitra ity andiany faha-8 ity.
Tamin’ny volana janoary lasa teo moa dia nisy ny am-pahany tamin’ity andiany faha-8 ity, efa nivoaka. Nahitana volom-borona latsaka, tao anatin’izy io, izay misy hifandraisany amin’ny tantaran’i Jon Snow. Telo volana sisa izany no andrasana dia hivoaka any Frantsa izy ity.
2. Na dia eo aza ny fanenjehina azy noho ny resaka fanolanana sy herisetra ara-pananahana dia nanambara ilay mpihira R Kelly fa hanatanteraka fitetezam-pirenena. Handalo ao Aostralia, Nouvelle Zélande sy Sri Lanka izany fampisehoana ho tanterahiny ato ho ato izany. Izy nefa efa nialan’ny label nisy azy sy ny mpamoron-kirany ary tsy mahazo miditra mandrakizay ao Filadelfia ihany koa.
3. Rehefa niaraka nandritra ny herin-taona mahery izao dia nanaiky ny fangatahan’i Cooke Maroney azy ho vady i Jennifer Lawrence. Nipetraka ao New York, izy roa ireto, araka ny fantatra satria tompona magazay fampirantiana zava-kanto ao Upper East Side ao, ity vadiny ity. Mbola tsy nisy namoaka tany anaty aterineto aloha ny sarin’ilay peratra eny an-tanany fa ny namany akaiky no nilaza fa lehibe tokoa ilay vato eo aminy.
4. Dia tena hiady sy hifampikasi-tanana tokoa izany i Booba sy Kaaris amin’ny volana jona ho avy izao, any Tonizia. Hisy fitsipika, izay manaraka ny ady totohondry mihitsy moa hametra ity ady eo amin’ireto mpanao “rap” roa ireto ity. Tsy azo atao izao ohatra ny manindrona maso, misintona sofina. Tsy hevitra avy amiko ity hifampikasi-tanana ity, hoy i Kaaris fa i Booba no misisika ka tsy maintsy ho tanterahina izany.